सिप सिकाउँदै ए फोर - GBM
सिप सिकाउँदै ए फोर
सिद्धार्थनगर नगरपालिका–८ मा अवस्थित ए फोर ट्रेनिङ सेन्टर प्रा.लि.रुपन्देहीका विभिन्न स्थानीय तहका महिला तथा युवायुवतीहरुलाई सिप सिकाउने कार्यमा अग्रसर देखिएको छ । संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेर विभिन्न किसिमका सिपमुलक तालिम दिइ आत्मनिर्भर बनाउने कार्य समेत गरिरहेको छ ।
ए फोर ए फोर ट्रेनिङ सेन्टरले हाल ओमसतिया, रोहिणी, मायादेवी र सियारी गाउँपालिकामा विभिन्न किसिमका सिपमुलक तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ । यी स्थानीय तहहरुका विभिन्न वडाहरुमा बुटिक, हाउस वायरिङ, सिलाईकटाई, व्युटीपार्लर लगायतका तालिम सञ्चालन गरिरहेको प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक हेमा बेल्बासे (के.सी.) ले बताइन् । “हामीले सञ्चालन गरेका तालिम उपलब्धीमुलक होस भनेर प्रायजसो ३ महिने (३९० घण्टा) तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौं, केवल तालिमका लागि तालिम सञ्चालन गरेर फलदायी हुँदैन्, उनले भनिन् ।” शहर मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई पनि सिपमुलक तालिम प्रदान गरेर आत्मनिर्भर बनाउने संस्थाको उद्धेश्य रहेकोे उनको भनाइ छ ।
त्यसै क्रममा रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित वनघुसरीमा निःशुल्क ३ महिने (३९० घण्टा) प्रोफेसनल फेसन डिजाइन तालिम बुधबार देखि सुरु भएको छ । सियारी गाउँपालिका कार्यालयको सहयोग तथा ए फोर ट्रेनि¨ सेन्टर प्रा.लि.को व्यवस्थापनमा सुरु भएको तालिममा गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर ४ र ५ का ३० जना महिलाको सहभागिता रहनेछ ।
तालिमको उद्घाटन गर्दै सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयोध्या थारुले सिप जीवनको महत्वपूर्ण जग भएको बताए । उनले युवाहरु विदेशिन बाध्य हुनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै सिप सिकेर स्वदेशमा स्वरोजगार बन्न सकिने धारणा राखे । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” नारा साकार पार्न पनि सबै लाग्नुपर्छ, उनले भने ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमृता गुरुङले महिलाहरुलाई सिप सिकाइ आत्मनिर्भर बनाउने कार्य गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको बताइन् । उनले आगामी दिनमा पनि सिपमुलक तालिमलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिइन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिन प्रसाद भट्टराईले गत वर्ष पनि गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर ६ र ७ मा प्रोफेसनल फेसन डिजाइन तालिम सञ्चालन गरिएको र फेसनप्रति आर्कषण बढ्दै गएकोले तालिम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सियारी गाउँकार्यपालिका सदस्य देवकी खरेलले तालिम सिकेका महिलाहरुले भोलिका दिनमा प्रशिक्षकको रुपमा तयार भइ अरु महिलाहरुलाई सिकाउनुपर्ने बताइन् । वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष थमन कुमार पौडेलले तालिमलाई ठूलो अवसरको रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
ए फोर ट्रेनिङ सेन्टर प्रा.लि.का कार्यक्रम संयोजक सुनिता पाठकको स्वागत मन्तव्य तथा कार्यक्रम संयोजक हेमा बेल्बासे (के.सी.) को सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । असार ३ गते सम्म सञ्चालन हुने तालिमको प्रशिक्षक नम्रता पचभैया(मगर) ले सहजीकरण गर्नेछिन् ।
← सशस्त्रद्वारा अवैध सामान बरामद
सहकारीको लगानी उत्पादनमा गर (सम्पादकीय) →
समुह प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति वितरण